Utamatisi ngegalikhi ebusika iminwe yembopha, ngokusebenzisa i-grinder yenyama, ngaphandle kwenzalo, ngaphansi kweqhwa, zokupheka nezithombe, ividiyo
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Ukupheka kwezingqikithi ebusika
Utamatisi ngegalikhi ebusika - Iminwe ikhotha, ngokusebenzisa i-grinder yenyama, Ngaphansi kweqhwa, ngaphandle kokuzala inzalo kanye nayo. Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ngezinyathelo ezinezithombe zika utamatisi ngegalikhi ebusika
Njalo ngonyaka, i-autumn evulekile isenza sijabule ngokuvuna imifino nezithelo ezintsha - umkhathi wangempela wabathandi bokudla kanye nokudla okunempilo okunempilo. Phakathi nalesi sikhathi, abesimame besifazane bazama ukuthola isikhathi sokubeka imali ezinyangeni ezinde zasebusika, ukuhlinzeka ngamavithamini akhiqizwa ekhaya kanye nezincelisi eziwusizo. Utamatisi okheniwe uhlale ujabulela ukuthandwa okungashintshi - bahlanjululwa, basolisiwe, bahlanganiswe ngezicucu nasemasaladi yemifino. Siphakamisa ukuthi wengeze iresiphi enye yangempela yemalungiselelo ebusika encwadini yakho yencwadi: utamatisi olusolwandle olunamanzi. Inketho enjalo yokongiwa kwemvelo ivumela ukugcina izimfanelo zika-utamatisi isikhathi eside. Futhi yeka iphunga elimnandi ozolizwa uma uvula imbiza nge-snack! Sizokujabulela ukuhlanganyela nawe ngezindlela zokupheka ezingcono kakhulu ngezinyathelo ngesithombe sezotamatisi ngegalikhi ebusika: ngaphansi kweqhwa, lihlanjululwe ngama-izaqathe, lisikiwe ngemifino, ngaphandle kwenzalo kanye nalo, ngaphandle koviniga. Uzofunda ukupheka kuphela "obomvu" kuphela obomvu, kodwa futhi utamatisi obuluhlaza ngegalikhi ebusika - nje ukhahle iminwe yakho!
Utamatisi ngaphansi kweqhwa ne-garlic ebusika Utamatisi obusiwe ngegalikhi kanye nemifino Iresiphi yamatamatisi aluhlaza ngegalikhi kanye ne-pepper ebusika Utamatisi obuthiwe nge-grinder yenyama negalikhi Utamatisi okheniwe ngegalikhi ebusika ngaphandle koviniga. Utamatisi olunamanzi nge-garlic, isanqante ne-horseradish Utamatisi oluhlwabusayo ngegalikhi ebusika
Utamatisi ngaphansi kweqhwa ne-garlic ebusika - iresiphi ngesinyathelo-ngesinyathelo ngesithombe ngaphandle kwenzalo
Sifaka utamatisi ebusika ngegalikhi
Lokhu kungenye yezinto zokupheka ezilula kakhulu utamatisi oqoshiwe ngegalikhi ngaphandle kwenzalo - uzodinga okungenani izithako kanye nesikhathi. Ngokuba ukudla okulula kuyabonakala ngokunciphisa ukunambitheka amanothi, naphezu kokuba khona uviniga negalikhi. Ekubukeni, utamatisi emgodini kubonakala sengathi "uphuphuthele" ngeqhwa - uthathelwa ugarlic omhlophe okhishwe iqhwa. Futhi iresiphi yethu yesinyathelo ngesinyathelo enezithombe ezimibalabala iyokwenza inqubo yokupheka isiphuzo se-tomato eqondakalayo futhi elula.
Izithako zokuvuna utamatisi ebusika ngaphansi kweqhwa (imbiza ngayinye)
utamatisi - 1 kg
i-clove i-garlic echotshoziwe - 1 tbsp.
uviniga 9% - 2 tbsp.
ushukela - 1,5 tbsp.
usawoti - 2 tbsp.
Utamatisi - ngaphakathi kellicisi, ebusika
Incazelo yesinyathelo ngezinyathelo zamatamatisi recipe ngegalikhi ebusika - ngaphansi kweqhwa
Ngokuba ukudla okulula, kungcono ukhethe utamatisi ngobuncane obukhulu - bahlanza futhi bathululelwa embizeni ehlanzekile. Gcwalisa ngamanzi ashisayo, ushiye amaminithi angu-20, bese usula amanzi embizeni ehlukile. Sifaka uketshezi oluketshezi emlilweni, solim-saccharim. Ngemuva kokubilisa, i-marinade isilungile.
Ukusebenzisa i-grater kanye ne-press grind ehlanjululwe ama-clove garlic - "ekuphumeni" kufanele kube isipuni somkhiqizo. Engeza embizeni utamatisi.
Thela kuviniga kanye ne-marinade eshisayo. Ukuhlanza izindwangu zangaphambi kwenzalo nokulinda ukupholisa. Ukudla okulula futhi okulula ebusika sekulungele - sibeka izimbiza ku-pantry.
Utamatisi omuncu omuncu ngegalikhi kanye namakhambi - iresiphi yokupheka okusheshayo
Ukunambitha ukulungiselela imifino esimnandi akudingekile ukubala izinyanga ngaphambi kobusika, ukuze uvule imbiza enomhawu nge "unembeza ocacile". Ngokusho iresiphi yethu, ungakwazi ukupheka ngokushesha utamatisi omuncu nge-garlic kanye namakhambi, nangemva kosuku - thola ukudla okubabayo.
Uhlu lwama-ingredients on recipe for utamatisi usawoti
Utamatisi awukhulu kakhulu - 0,5 kg
i-clove garlic - ama-7 - 8 ama-pcs.
dill ngamakhambi - 1 bunch
iqabunga le-laurel - ama-3 ama-pcs.
uviniga - izipuni ezimbili.
ushukela - 1 tbsp.
usawoti - 1 tbsp.
pepper amnyama - ama-5 - 6 ama-pcs.
pepper okubabayo - 1 pc.
amanzi - ilitha eli-1
Ukulungiselela utamatisi omuncu omuncu ngegalikhi kanye namakhambi - isinyathelo ngesinyathelo imfundo
Siqala nge-marinade - uthele amanzi epanini bese ushukela ushukela, usawoti, i-leaf leaf, umnyama omnyama. Sifaka umlilo futhi emva kokubilisa sisisusa. Thela kuviniga bese ulinda aze aphephe.
Izidakamizwa ze-garlic zihlanzwa futhi zichotshozwe nge-crust, ne-dill - eqoshwe kahle. Sihlanganisa lezi zinto ezimbili epulini elihlukile.
Utamatisi kudingeka ahlanzwe futhi omisiwe. Sinquma isithelo ngasinye, cishe ingxenye.
Sika izipelepele ezishisayo zibe izindandatho ezincane. Ngaphakathi kwetamatisi sifaka ingxube ye-garlic-dill ye-spoon, kanye ne-ring of hot pepper. Beka izithelo ezigxotshiwe esitsheni noma esitsheni - usike.
I-marinade ehlile (cishe ama-degrees angu-40) uthele utamatisi bese umboza ngesembozo. Sifaka isitsha esiqandisini, futhi emva kosuku ungakwazi ukujabulela ukunambitheka okubukhali kokudla okulula.
Iresiphi yamatamatisi aluhlaza ngegalikhi kanye nepelepele ebusika - iminwe ithole
Utamatisi oluhlaza ngegalikhi ebusika
Uma ekwindla kusheshe futhi kubanda, ama-patches aluhlaza angahlala emibhedeni. Akusivuthiwe, lezi zithelo zinomusa omuncu nombala omnyama ongathandeki. Nokho, ngokusho iresiphi yethu ungakwazi ukulungiselela utamatisi oluhlaza ubusika, egcwele igalikhi - nje ukukhotha iminwe yakho! I-appetizer enjalo enephunga ngezinongo izoba "hit" yangempela yemenyu yemikhosi noma yansuku zonke. Ebusika, kwanele ukuba ungenalo umgodi ngendwangu, uhlakaze kahle epulini bese uthele ngamafutha omquba omnandi. Ungakwazi ukukhonza etafuleni!
Hlanganisa utamatisi oluhlaza ngegalikhi kanye ne-pepper - izithako zokuvuna ebusika
utamatisi oluhlaza - 5 kg
i-pepper bulgarian - ama-5 - 6 ama-pcs.
pepper ebukhali kakhulu - 1 pod
inhlanganisela yesinaphi eyomile nomnyama omnyama (ama-peas) - 1 tbsp.
i-garlic - echotshozwa nge-grinder yenyama (1 ingilazi) futhi uthathe amapuleti (ikhanda eli-1)
amanzi - amalitha angu-5
ushukela - izinkomishi ezimbili
usawoti - 1 ingilazi
i-acetic essence - izinkomishi ezingu-0.5
Utamatisi oluhlaza ngegalikhi nopelepele ebusika - umyalo wokuvuna
Siqala ngokulungiselela ukugcwaliswa. I-pepper enomnandi neyeshisayo igaxa i-grinder yenyama futhi ihlanganise nengilazi ye-garlic eqoshiwe.
Ukuze uthole iresiphi, utamatisi amancane noma aphakathi, okungenani afana nosayizi, afanelekile. Izithelo zihlanjululwa ngaphansi kwamanzi asebenzayo futhi ngamunye uthathe cishe ingxenye - senza "iphakethe" elinjalo. Ngaphakathi sibeka ukugxila kanye namacwecwe amabili kagalikhi.
Ezimbizeni ezenziwe ngaphambili ngaphambili sibeka utamatisi, futhi phezulu sichitha inhlanganisela yesinaphi nomnyama omnyama. Uma uthanda ukulondolozwa "ngenhlansi," ungangeza ucezu lwe-pepper, uhlutshiwe kusuka kumbewu - embizeni yelitha esithatha cishe ingxenye yesithathu ye-pod.
I-marinade ikhiqizwa kanje: amanzi abilisiwe epanini elikhulu, bese sichitha ushukela nosawoti ngokusho iresiphi. Susa ekushiseni bese ufaka uviniga. Gcwalisa izimbiza ezigcwele futhi umboze ngamabhodlela abilisiwe emanzini ashisayo. Manje faka izimbiza embizeni yamanzi enamandla, ungakhohlwa ukubeka phansi ithawula, ulibeke emlilweni. Ngemuva kokubilisa, sishaya imizuzu engu-15-20.
Siqinisa izintambo bese senza izimbiza zihlehlise phansi. Vala phezulu ngeengubo efudumele bese ulinda ukupholisa. Ukulondolozwa kungabhekwa kancane, kodwa lokhu kuyinto evamile, ngoba kunegalikhi. Konke, ungafaka ku-pantry.
Ukuhlanza utamatisi nge-grinder yenyama ngegalikhi - iresiphi yokuvuna ebusika
Abaningi bayakwazisa ukuvuna kokuvuna ebusika: izinongo ezincane kanye nama-preservatives, kungcono. Konke lokhu nokunye okuningi uzothola ku-iresiphi yethu - utamatisi ocolile ocolile ngegalikhi, ugayiwe nge-grinder yenyama ngokufanelekile njengokwesezela kumazambane ashisayo, inyama kanye nenhlanzi. Futhi ukuthi isiphuzo esiphundu se-spaghetti noma i-pasta itholakala ngesisekelo salesi siphuzo - qiniseka ukuzama!
Izithako zokupheka utamatisi ngokusebenzisa i-grinder yenyama
utamatisi omusha - 1kg
i-garlic - 100 gr.
Usawoti, ushukela kanye nomsila womhlabathi - ukunambitha
Recipe for utamatisi ngegalikhi ebusika, kuphekwe ngokusebenzisa grinder inyama
Ematamatisi ahlanzekile akhethiwe sasiqeda i-peduncle. Izithelo zishisa amanzi ashisayo kanye ne-peel. Khona-ke sidlula i-grinder yenyama.
Inqwaba yamatamatisi ithululelwa epanini elikhulu.
Ama-lobul lobules achotshoziwe ngokuchotshozwa noma ukugcoba kwi-grater.
Kumamatamatisi agayiwe, engeza i-garlic, ushukela, i-pepper, usawoti bese uhlanganise konke kahle.
Sifaka epanini emlilweni ophakathi, futhi sivuselela njalo, silinde ukubilisa. Njengendlela yokukhetha - izinongo ziyengezwa emva kwamathumba we-tomato mass.
Ingxube evuthayo ithululelwa ezimbizeni ezihlanziwe ezihlanzekile, zigoqwe futhi zifake ukupholisa. Ama-Blanks agcinwe kahle endaweni epholile, kodwa angaphezu konyaka.
Utamatisi ekheniwe ngegalikhi ebusika ngaphandle koviniga
Iresiphi yamatamatisi ekheniwe ngegalikhi ngaphandle koviniga uyonambitha kulabo abathanda ukudla okunempilo nokuphilile. Futhi engeza embizeni ithebhulethi "imilingo" ye-aspirin, uzosusa ukuhlukunyezwa nokushaya inzalo kwezinguquko. Inhlanganisela yokuqala yezinongo izonikeza isiphuzo isiphuzo esisha "umsindo." Zama futhi umangale!
Izithako ezidingekayo ze-tomato recipe negalikhi ebusika ngaphandle koviniga (ngama-3-litre angakwazi)
i-mint entsha - amaqabunga amane
isinamoni - esiqongweni sommese
i-citric acid - engxenyeni yommese
i-aspirin - amaphilisi amabili
ushukela - 200 g.
usawoti (hhayi iodidi) - 100 gr.
Izinhloko ze-garlic - ama-2-3 ama-PC.
Inqubo yokuvuna utamatisi ngegalikhi ebusika ngaphandle kwemithi ngaphandle kweviniga
Sinyakaza izimbiza, kodwa sizibeka ngaphakathi kweqabunga lama-laurel kanye namaqabunga amabili amhlophe.
Utamatisi ahlanjululwa ngaphansi kwamanzi agijima, futhi izithelo ngasinye zinqunywe.
Susa ama-clove e-garlic e-husk.
Utamatisi ngamunye kumele "uhlotshwe" ngegaliki - nje unamathele esihlokweni. Beka izithelo ezimbizeni.
Gcwalisa ngamanzi ashisayo, okwathi ngemva kwemizuzu eyishumi uhlangene epanini bese uwubeka emlilweni.
Emva kokubilisa, ushukela nosawoti emanzini bese uwaxuba - i-marinade ilungile. I-sinamoni, i-aspirin, i-peppercorn ne-citric acid yengezwa embizeni ngayinye ngokusho iresiphi.
8. Gcwalisa nge-marinade eshisayo futhi ngokushesha uphakamise isembozo sensimbi. Manje udinga ukuvula imbiza bese "ukufihla" ngaphansi kwengubo efudumele. Khona-ke sincishisa ukulondolozwa okukhuhlile endaweni yokugcina unomphela.
Utamatisi olwandle olunamanzi ngegalikhi, izaqathe kanye ne-horseradish - iresiphi esimnandi ebusika
Kulesi iresiphi, utamatisi ngokuhlanganiswa nezinqathe, i-horseradish ne-garlic ithola ukunambitheka okungejwayelekile okungavamile. Futhi yeka indlela enhle futhi enomusa ngayo izinhlobo ezihlukahlukene zombala ezibukeka ebhange! Yengeza le iresiphi yesiphuzo esiphundu ku-"piggy bank" yakho - isiphuzo esenziwe ngomumo siyobonga nakanjani.
Izithako zika utamatisi oqoshiwe ngegalikhi, izaqathe kanye ne-horseradish ebusika
utamatisi obuningi obuhlukene - 1.5 kg (imbiza ngayinye yama-3 litre)
izaqathe - ½ ama-pcs.
anyanisi - anyanisi ongu-1
ama-clove - ama-2 ama-pcs.
i-peas peas kanye nephunga elimnandi - ama-3-5 ama-pcs.
isinaphi ngezinhlamvu - 1/3 tsp
i-horseradish leaf - yesithathu
amaqabunga ama-currant - ama-2 ama-pcs.
i-dill - igatsha elingu-1
i-clove garlic - ama-4 ama-PC.
iqabunga le-laurel - 1 pc.
amanzi 1.5 amalitha
usawoti - 1.5 tbsp.
ushukela - 3 tbsp.
uviniga - 1.5 wezipuni.
Ukuvuna utamatisi oqoshiwe obusika ebusika
Ama-karoti no-anyanisi kudingeka bahlanzwe, banqunywe izindandatho bese bebeka ngaphansi kwezimbiza ezihlanzekile ezihlanzekile. Sifaka i-garlic nge-dentic kanye nezinongo ezigcwele ngokusho iresiphi.
Utamatisi we-"caliber" enkulu esiyidingayo ukubeka phansi naphakathi kwembiza, kanti ezincane zigcwalisa phezulu kwesitsha. Phakathi kwezithelo ungakhohlwa ukubeka amaqabunga e-currant, i-horseradish, i-dill, kanye ne-bay leaf.
Ngokuba marinade ngamanzi abilayo sichitha ushukela, usawoti kanye noviniga. Susa emlilweni bese usheshe uthule izimbiza, futhi phezulu umbozwe ngamabhodlela abilisiwe. Manje udinga uketshezi amathini ngamanzi abilayo imizuzu engu-15 kusukela ekuqaleni kwamathumba (amathini angama-3 litre) noma amaminithi angu-8 kuya kwangu-10 (amathayi angu-1 litre).
Vula ukushona kwelanga uphenduke phansi futhi ulinde ukupholisa okuphelele.
Utamatisi omnandi ngegalikhi ebusika - iresiphi yevidiyo
Amalungiselelo emifino eyenziwe ekhaya yithuba elihle kakhulu lokulondoloza amavithamini "ehlobo" ngaphambi kobusika. Ngalesi iresiphi ungakwazi ukulungiselela kalula ukudla okumnandi kunamatamatisi ebusika. Ngakho-ke, ngosizo lwezindlela zokupheka zethu ngezinyathelo ongapheka utamatisi ngegalikhi ebusika: ngaphansi kweqhwa, uqoshiwe nge izaqathe, usawoti ngemifino, ngaphandle koviniga, ngaphandle kokuzala kanye nalo. Umphumela uzoba njengokuthi nje ukukhotha iminwe yakho. Ukuphumelela izikhala zakho kanye nokuhlolwa ekhishini!
I-Adjika ebusika - ukuthi isiphuzo kanjani ukupheka kusuka utamatisi, pepper, zucchini, apula kanye plums. Indlela yokwenza ubusika obuphansi be-azhik ngaphandle kwegaliki
I-Rozhiki ebusika - zokupheka zokupheka - okusawoti, okusawoti (okubandayo nokushisa), okukhanda. I-Caviar kusuka ku-ginger obomvu ebusika ku-multivark
Isaladi kusuka ku-courgettes ebusika: zokupheka okumnandi
Ilanga utamatisi omisiwe ekhaya ekhaya ebusika. Ukupheka kwezamatamatisi omisiwe kusuka kuJulia Vysotskaya, emafutheni, kuhhavini, elangeni
Utamatisi oluhlaza ebusika - zokupheka nge-photo Iminwe yezinkuni, usawoti kanye nosawoti, eKorea, isaladi ngaphandle kwenzalo
Caviar isitshalo seqanda ebusika - zokupheka ngesithombe - ngaphandle kwenzalo, Amanwe akhomba, e-Ukraine ngamatamatisi, ngaphandle kokuthosa
Ukupheka okuphekayo okupheka ukudla
Izindlela zendabuko zokunquma ukukhulelwa
I-inter-season shopping: indlela yokubuyekeza ikhabethe lekwindla ngokufanele
Yeka ukuthi okumnandi kanjani ukupheka imicibisholo ye-garlic - okuqoshiwe, okuthosiwe, ngesi-Chinese (zokupheka nezithombe)
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile we-hyacinth
Yini intombazane okufanele yenze ngesikhathi esisodwa empilweni yakhe?
Umngani wakho omkhulu isoka
Ama-Sandw sandwich ne-ingulube neklabishi
10 Raincoats imfashini ekwindla 2015
Ukwenyuka kwesisu ngezindlela zokuhlinzeka
Yini elindele uMariya ngo-2014
Imithetho lapho uhlangana nabantu abangabazi
Ungayithola kanjani indawo oya kuyo?
Kungani ingane inqaba ukubeletha